Home Somali News Dowlada Afghanistan oo wadahadal ugu baaqday Talibanka!
Cabdullah Cabdullah oo u hadlay Xukuumada Afghanistan ayaa shaaciyey in dhawaan ay bilaaban doonaan wadahadalo fool ka fool ah oo ay yeeshaan dowlada Afghanistan iyo kooxda Talibanka.
Cabdullah Cabdullah ayaa sheegay in dowlada Pakistaan ee jaarka la ah ay kaalin weyn ka qaadaneyso in kooxda Talibanka lagu cadaadiyo wadahadal inay la yeeshaan dowlada Afghanistan.
Xukuumada Afghanistan ayaa sheegtay inay shacabkeeda ay si joogto ah oo aan mugdi ku jirin ugu soo bandhigi doonto wadahadalada labada dhinac ay dhawaan yeelan doonaan.
Dhinaca Talibanka ayaa qoraal ay soo saaren ku sheegeen inaysan xiligan faah faahin ka bixin doonin hadalka kasoo yeeray dowlada Afghanistaan, isla markaana hadii wax soo kordhaan ay soo bandhigi doonaan.
Dowlada cusub ee Afghanistaan ee uu Madaxweynaha ka yahay Asharaf Ghani ayaa qodobka ugu weyn ee horyaal uu yahay sidii ay heshiis ulla geli lahaayeen kooxda Talibanka oo weli awood weyn ku leh gobalada dalkaasi.
Horey ayey wadahadalo u yeesheen xukuumadii hore ee Xamid Karsay iyo Talibanka, balse kulamadaasi ayaa markii danbe kusoo dhamaaday natiijo la’aan.
Somaliya: Ciidankii Kenya oo Saaka isaga baxay Deegaanka Buulo-guud ee Dulleedka Magaalada Kismaayo